Mba hilamina tsara sy hahomby ny fanomanana fifidianana demokratika 2018 ! - Transparency International - Initiative Madagascar
Mba hilamina tsara sy hahomby ny fanomanana fifidianana demokratika 2018 !
Izahay fikambanana ao amin’ny Firaisamonimpirenena Malagasy (OSCs) izay manao sonia etsy ambany, na ao anatin’ny Hetsika ROHY na tsia, dia maneho etoana ny fijerinay momba ny fifidianana ho avy, sy ny rivotra politika iainana amin’izao fotoana izao, amin’izao ankatoky ny fifidianana 2018 izao. Marihinay indray fa ny fijerinay dia mikatsaka foana hatrany ny tombontsoan’ny vahoaka ary io ihany, fitsipika izay tsy itovizanay amin’ny antoko politika.
Ny momban’ny finiavan’ny mpitondra ankehitriny ny hanaovana fitsapan-kevi-bahoaka
Izahay OSCs dia mitsipaka an’io fitsapan-kevi-bahoaka io. Raha zohina ara-tantara mantsy ny fihetsik’ireo mpisehatra politika, dia tsy tokony ny fitondrana izay eo ampamaranana ny asany velively no hanitsy ny Lalampanorenana (LP). Aoka ny antoko politika rehetra tsy hanan’eritreritra toy izany intsony manombok’izao. Na misy lesoka toa inona aza io LP io, ny fiziriziriana hanao fanitsiana azy alohan’ny fifidianana filoham-pirenena dia hiteraka krizy vaovao satria ny ankabeazan’ny mpisehatra dia efa mitsipaka azy avokoa (firaisamonimpirenena, antoko politika, …). Tsy misy hafa tsy ny mpanaradia ny fitondrana no mankato an’io ary hita fa mikendry an-kolaka ny hanalava ny fotoam-piasany no tena antony. Tiany amboarina ny andinin’ny LP izay heveriny fa manelingelina ny fandreseny amin’ny fifidianana. Verivereziny ny sain’ny vahoaka amin’ny satan’ny Fokontany ankehitriny ohatra. Tsara anefa ny manamarika fa raha misy tokoa ny finiavana politika, io fanomezana lanja bebe kokoa ny Fokontany sy fanaovana fifidianana ny filoham-pokontany io dia afaka tanterahina tsara sy amin’ny fomba haingana, fa tsy ilàna fanovàna ny LP izany. Na ny Kominina 1600 mahery aza anie izay efa vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana (CTD) efa ela, tsy mbola omen’ny ny fitondrana ankehitriny, ny fahefana feno sy ny enti-manana na ara-bola, na ara-pitaovana na fahafaha-manapan-kevitra tena entiny manatanteraka ny andraikiny e. Zary lasa resa-be sy fampanantenana poak’aty ary jono atao amin’ny fotoam-pifidianana fotsiny ny fitsinjaram-pahefana tena izy fa tsy atao akory rehefa avy eo. Tsy ekenay OSCs ny handaniana ny volam-bahoaka amin’izany fampandriana adrisa izany. Ireo fifidianana nasionaly indrindra ny fifidianana filohan’ny repoblika izay efa voafaritra mazava ao amin’ny LP fa tokony hatao amin’ny 2018 irery ihany no tokony handaniana ny vola efa voasoritra ao amin’ny Teti-bola 2018 nolazain’ny Minisitry ny Vola sy ny Teti-bola.
Raha toa ka hanao fanitsiana LP, aoka ho tanterahina tsy ankamehana izany sy ao anatin’ny fandalinana ary ny fandraisana ny hetaheta sy hevitry ny vahoaka manerana ny lafy valon’ny Nosy : eo amin’ny sehatra sosialy, toe-karena, tontolo iainana sy kolontsaina, fahaiza-mitantana, sns. Aoka izay mpitondra voafidy amin’ny 2018 no hitarika ny fanitsiana azy raha ilaina. Ny soson-kevitray dia tsara raha ampidirin’ny mpilatsaka ho fidiana rehetra izay mahatsapa ny filana fanovana LP ao amin’ny programan’asa ho tanterahiny ny fanitsiana tiany atao. Hisy amin’izay ny fifanakalozan-kevitra matotra sy ampilaminana mandritra ny fampielezan-kevitra.
Toa ny ambaran’ny CENI izay tohananay ny momba an’io, ny tetiandron’ny fifidianana Filohan’ny Repoblika dia tokony fantatra sy aely haingana araka izay tratra, hahazoan’ny tompon’andraikitra isan’isany avy miomana tsara. Heverinay fa ny CENI dia tokony hanana haingana ny enti-manana ilaina rehetra anatanterahana tsara sy matotra ny andraikiny araka izay efa tapaka mialoha.
Momba ny lalàna sy ny rafitra hifehy sy ho ampiharina amin’ny fifidianana
Mitaky izahay OSCs ny hisian’ny mangaraharaha momba ny volavolan-dalàna ketrehin’ilay Komity iraisana Ministera 5 (Comité Interministériel) nandray ny soson-kevitra fanatsaràna ny lalàna hifehy ny fifidianana izay vokatry ny asan’ny « Commission Consultative » ka natolony ny 18 Jolay 2017. Zon’ny vahoaka sy ny firaisamonim-pirenena no mahalala mialohan’ny hametrahana azy ao amin’ny Parlementa ny volavolan-dalàna hifehy ny fifidianana izay ahafahany mifidy amin’ny fomba malalaka, madio sy manaja ny fitovian-jo. Maniry izahay mantsy handinika ny kalitao sy ny fahampian’izany volavolan-dalàna izany miaraka amin’ny mpahay lalàna miara-miasa aminay, dia hanome soson-kevitra na handray fepetra hafa fanatsaràna araka ny zava-misy.
Hiara hiasa amin’ny CENI izahay OSCs, araka ny andraikitra andrasana aminy dia ny fandrindrana ny fifidianana am-pilaminana sy tsy ahitana fitanilàna. Harahinay maso amin’izany ny soatoavina tokony hajainy, sy ny fikatsahany/fiarovany tokoa ny fahaleovantenany, na ety amin’ny foibe izany, na eny amin’ny rantsamangaikany manerana an’i Madagasikara. Dieny izao izahay dia manainga sahady ny CENI hanala na hamongotra izay mety hahitana fifanoherana tombontsoa indrindra miarak’amin’ ny antoko politika na izany eo amin’ny mpikambana, na eo anivon’ny mpiasany rehetra, na iza na iza, sy izay mpisehatra hafa toy ny OSCs sy olona manao ny fanaraha-mason’ny fifidianana.
Lalàna mifehy ny kolikoly sy ny hosoka rehetra amin’ny fifidianana
Ho mailo manokana izahay momba ny lalàna hamehezana ny kolikoly sy ny hosoka rehetra mety hiseho amin’ny fifidianana. Hita koa mantsy fa noesorin’ny fitondrana izany tamin’ny lalàna 2016-020 (01 Jolay 2016) mikasika ny ady amin’ny kolikoly.
Hojerenay manokana ny lalàna mifehy ny famatsiam-bolan’ny antoko politika sy ny famatsiambolan’ny fampielezan-kevitra. Tokony ho fenoina ireo eo amin’ny lafin’ny fetran’ny fandaniam-bola, ny fahafantarana ny loharanom-bola voalohany, ny fametrahana rafitra fanaraha-maso ny kaontim-bolan’ny fampielezan-kevitra, ary tsy adino ny famaritana ny famaizana ho an’ireo antoko tsy manara-dalàna. Ny antony hifehezana io famatsiam-bola io dia, voalohany ny itovian’ny kandida rehetra eo amin’ny fahafahany mahazo fandresena (“égalité des chances”) . Ny antony faharoa ary tsy ny kely indrindra, dia ny iadiana amin’ny hosoka rehetra (fanomezana vola ny mpifidy na ireo mpiasam-pifidianana, …) sy ny kolikoly avo lenta arahana famotsiam-bola hita, tsy mandritra ny fampielezan-kevitra ihany, fa rehefa amperin’asa ilay mpitondra voafidy ka nanaiky ny enti-manana sy volabe mihoampampana. Tokony ajanona amin’izay ireny fampielezan-kevitra ataon’ny kandida sasantsany izay mampiseho enti-manana tsy fanta-pihaviana ary mampiteny ny moana miohatra amin’ny fahantrana be misy ka toy ny fanamavoana ny vahoaka mihitsy. Ny tsy fahafantarana ny tambin’ireny no mitondra loza ho amin’ny firenena eo amin’ny lafin’ny toekarena sy sosialy satria tsy fantatra ny nifanarahana ny roa tonta mpandray sy mpanome. Ahiana ho tambin’ny vola nanaovana fampielezan-kevitra anefa ny fanomezana dieny mialoha tsenam-panjakana amin’ny tolo-bidy lafo, ny fahafahana tsy handoa hetra sy haba araka ny tokony ho izy, ny fijerevam-potsiny ny trafika sy varo-maizina isan-karazany izay mamono ny rariny sy ny hitsiny eo amin’ny fidiram-bolam-panjakana, sy ny fifaninana tokony hadio eo amin’ny orin’asa Malagasy mandoa hetra, ary ny harena voajanahary sy harena ankibon’ny tany tokony hitondra amin’ny fandrosoan’ny Malagasy rehetra.
Izahay OSCs dia vonona hanaitra ny vahoaka eny ambanivohitra sy antanan-dehibe ny ifantenany tsara ireo kandida mampiasa sy mampiseho enti-manana mihoampampana, izay manambara fa mampiahiahy sahady ny fomba hanajany ny marina sy ny rariny, araka ny voalazanay etsy ambony. Manentana izahay ny hankatoavan’ny antoko politika tsara sitrapo sy ny kandidany ny fitsipi-pitondratena mandritry ny fampielezan-kevitra (“code de conduite pendant les campagnes électorales” ) izay hamporisihinay ny hametrahana azy feno amin’ity fifidianana ity , iarahan’ny mpisehatra rehetra ; CENI, rafitra miady amin’ny kolikoly sy ny famotsiam-bola, antoko politika tsara sitrapo, ny firaisamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankina.
Ankoatr’izany, dieny izao izahay dia manentana antsika vahoaka mpifidy matsilo saina rehetra hitaky ny famoahana ny voka-pifidianana isaky ny «biraom-pifidianana » tsirairay ka ho hita taratra izany rehefa mampiakatra ny tontaly eo anivon’ny kaominina, distrika, faritra sy foibe, ary alefa amin’ny aterineto/Internet mba halalaka ny fahazoana vokatra sy vaovao marina. Ilaina ny hisian’ny lalàna mamaritra an’io famoahana io dieny izao.
Amin’ny akapobeny, ny Firaisamonimpirenena dia hiasa mafy hanaramaso ny fametrahana sy ny fampiharana lalàna madio sy mahomby hitondra fifidianana ekena sy itokisan’ny daholobe, amin’ny dingana fanaovana ny fifidianana rehetra : hatramin’ny fametrahana ny lalàna, ny lisitry ny mpifidy izay tsy tokony hihidy indrindra amin’ny vehivavy sy ny tanora ary hahazoan’ny rehetra mijery, hatramin’ny fanisam-bato, ny fanambarana ny vokatra, ary koa ny fanaraha-maso ny fomba fanao politika sy ny asa tanterahana araka ny fampanantenana ataon’ny kandida mandritra ny fampielezan-kevitra.
Noho ny fahatsapana mivantana sy tsy azo ihodivirina ny voka-dratsin’ny fifidianana kitoatoa eo amin’ny fiainantsika sy ny ho avin’ny taranantsika Malagasy, ny Firaisamonimpirenena, indrindra ny Hetsika ROHY (Rindran’ny Olompirenena Hiarovana ny Iaraha-manana) dia tsy hanaiky intsony ny hisian’ny fifidianana feno hosoka, ny mpilatsaka ho fidiana tsy mendrika, sy ny vokatra tsy azo antoka. Hampahafantatra tsy ho ela ny Paikadiny momba ny Fifidianana ny ROHY, izay hotanterahiny miarak’amin’ny mpiaramombon’antoka misy eo amin’ny Firaisamonim-pirenena, ka mifototra tsara amin’ilay heriny voalohany dia ireo OSCs vonona miely eran’ ny faritra 22 n’i Madagasikara, miasa eo amin’ny sehatr’asam-pampandrosoana rehetra, na fikambanana tsotra izany , na ONGs, na vovonana sy tambazotra.
Andao hiaraka hisalahy isika hisian’ny fifidianana milamina, mikatsaka fahadiovana sy fahitsiana, mivoy fahatokiana, ary indrindra ho loharanom-pampandrosoana maharitra ary tsy manilikilika !
Antananarivo, 26 Septambra 2017
OSCs manao sonia ity fanambarana ity :
1) OSCs Mpikambana ROHY miisa 75 avy amin’ny faritra 22 (jereo ny lisitra Tompoko)
2) OSCs tsy Mpikambana amin’ny ROHY Mpiaramiombon’antoka aminy (2) :
TI-IM (Transparency International – Initiative Madagascar) sy ONG IVORARY
Ireo OSCs Mpikambana amin’ny ROHY miisa 75 manao sonia ny Fanambarana androany 26 Septambra 2017: